သင်၏ ၈နှစ်မှ ၁၂နှစ်အရွယ် ကလေးသည် PE ကိုမကြိုက် ပါက ဘယ်လိုလုပ်မလဲ - Hello Sayarwon
သင်၏ ၈နှစ်မှ ၁၂နှစ်အရွယ် ကလေးသည် PE ကိုမကြိုက် ပါက ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
လူပျိုပေါက်မဖြစ်မီအရွယ် ၈နှစ်မှ ၁၂နှစ်သည် ဖွဲ့ဖြိုးဆဲ အဆင့်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်း ကလေးဘဝနှင့် လူပျို ပေါက် အရွယ်ကြား ဖြစ်သည်။ ဤအရွယ်တွင် ကိုယ်ကာယ ပညာရေး (PE) သည် ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အလွန်အရေး ပါသည်။ သို့သော်လည်း တစ်နေ့တွင် သင့်ကလေးသည် PE ကို မုန်းသည်ဟုလာပြောပါက ဘယ်လိုလုပ်မည်နည်း။ ကိုယ်ကာယ ပညာရေးကို သင့်ကလေး စိတ်ဝင်စားလာအောင် သင် ဘယ်လိုလုပ်သင့် သလဲ။
သင့်ကလေးသည် အားကစားအား ဘာကြောင့်မုန်းသလဲကို သိရှိအောင် ဖော်ထုတ်ပါ။
သင်သည် ဆရာများ၊ သင့်ကလေး၏ သူငယ်ချင်းများ၊ နည်းပြများဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း သို့မဟုတ် သူတို့၏ အပြုအမူ ကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် သင့်ကလေး ဘာကြောင့် အားကစား ကို မကြိုက်သည်ကို သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကလေးများ အားကစားကို မကြိုက်သော ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်း များမှာ-
ကျွမ်းကျင်မှု၊ စွမ်းရည် သို့မဟုတ် တိုးတက်မှု မရှိ သောကြောင့် အချည်းနှီးဖြစ်ခြင်း
တစ်စုံတစ်ခုတွင် အောင်မြင်ရန် အနိုင်ရရန် ဖိအား များစွာ ပေးခံရခြင်း
နည်းပြများမှ မမျှတစွာ ဆက်ဆံခြင်း
မကြိုက်နှစ်သက်သော အားကစားကို ကစားရခြင်း
ကိုယ်အလေးချိန်၊ ခန္ဓါကိုယ် သွင်ပြင် သို့မဟုတ် အားကစား ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် မဝံ့မရဲခြင်း
နာကျင်မှု၊ မသက်သာမှုကို ဖြစ်စေသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင် ရာ အခြေအနေ
သင့်ကလေးကို အားကစားလုပ်ရန် အားပေးပါ။
ပြဿနာတစ်ခုစီအတွက် သင့်လျော်သော ဖြေရှင်းချက် ရှိသင့်သည်။
သင့်ကလေးသည် အားကစားတစ်ခုခုတွင် ကျွမ်းကျင်မှု သို့မဟုတ် စွမ်းရည် ချို့တဲ့သည်ဟု ခံစားရပါက အဆင့်နိမ့်သော အပန်းဖြေ ကစားနည်း များ သို့မဟုတ် အဓိကမကျသော အားကစားများ တွင် စိတ်ပါဝင်စားအောင် ဆွဲဆောင်ပါ။ သင့်ကလေး ကို ပိုပြီးသင့်တော်သော အားကစားရှာနိုင်ရန် ကူညီ ပါ။ အသင်းအဖွဲ့တွင် အဆင်မပြေပါက သို့မဟုတ် နည်းပြကို ကြောက်ရွံ့ပါက တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ကစားရသော ကစားနည်းများကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်ကလေးကို အနိုင်ကျင့်သော လက္ခဏာများ တွေ့ရပါက သင်သည် နိုးကြားစွာ တုံ့ပြန်ရမည်။ အနိုင်ကျင့်မှုကို နည်းပြအား တိုင်ကြားပါ။ ပြဿနာ ကို ထိရောက်စွာ မဖြေရှင်းနိုင်ပါက သင့်ကလေး ကို ထိုအသင်းမှ ထုတ်ပါ။ သင့်ကလေး၏ စိတ်ကျန်းမာ ရေးသည် ကိုယ်ကာယကျန်းမာရေးကဲ့သို့ အရေးကြီး သည်ကို သတိရပါ။
သင့်ကလေးသည် အားကစားလုပ်စဉ် နာကျင်ခြင်း၊ မသက်သာခြင်း ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။ ရောဂါအဖြေရှာခြင်းသည် သင့်ကလေး ကျန်းမာရေး တွင် ရောဂါတစ်ခုခု ရှိနေပါက သတိပြုနိုင်စေပြီး အသင့်တော်ဆုံး ကုသမှုကို ရှာပေးနိုင်သည်။
အားပေးတိုက်တွန်းစကားသည် အမြဲလိုအပ်သည်။ သင်သည် သူတို့၏ မဝံ့မရဲမှုကို ပြောင်လှောင်မည့် အစား သနားကြင်နာပြီး နားလည်ပေးပါ။ သင့် ကလေးကို သူ၏ ကိုယ်ကာယသွင်ပြင်အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိအောင် လုပ်ပါ။ သင့်ကလေးအား ကိုယ် ကာယ ပညာရေး၏ ကောင်းကျိုးများကို ဂရုတစိုက် ပြောပြရန် မမေ့ပါနှင့်။
မိဘများစွာသည် သူတို့ကလေးများကို အထူး လေ့ကျင့်ခြင်း များ ရရှိရန်၊ အခြားကလေးများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိရန် ဘောလုံး၊ ကိုယ်ခံ ပညာများ သို့မဟုတ် ဘတ်စကတ်ဘော သင်တန်းများကို စာရင်းသွင်းလိုကြသည်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့လုပ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် သင့်ကလေးကို ဖိအားများစွာ ပေးရာရောက်သည်။
ကိုယ်ကာယ ပညာရေး၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် သင့်ကလေး၏ ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေပြီး စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ မဝံ့မရဲခြင်းနှင့် ကိုယ်ခန္ဓါ ထိခိုက်မှုတို့ကို ခံနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင့်ကလေး၏ အနိုင်လိုစိတ်ကို တွန်းအားပေးရန် မဟုတ်ပါ။ သင့်ကလေးတွင် အားကစားကို ပင်ကိုယ်ချစ်စိတ် ဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ကိုယ်ကာယ ပညာရေး၏ ကောင်းကျိုးများကို စစ်မှန်စွာ ခံစားကာ ကောင်းစွာ ကြီးပြင်းနိုင်ပါစေ။
When Kids Hate Sports. https://www.verywell.com/when-kids-dont-like-sports-1256971/ Accessed March 30, 2017
What if Your Kid Hates Sports? http://www.happyhealthykids.com/kid-hates-sports/ Accessed March 30, 2017